Madaxweyne Cabdiweli oo magaalada Bursa ee Turkiga kula kulmay masuuliyiin meeqaam hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Cabdiweli oo magaalada Bursa ee Turkiga kula kulmay masuuliyiin meeqaam hoose
Madaxweyne Cabdiweli oo magaalada Bursa ee Turkiga kula kulmay masuuliyiin meeqaam hoose
August 27, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo dalka Turkiga kula kulmay masuuliyiin meeqaam hoose. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland.
Bursa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo ku sugan dalka Turkiga ayaa masuuliyiin meeqaam hoose oo kamid ah wasaarada waxbarashada Turkiga kula kulmay magaalada Bursa oo kutaala waqooyiga-bari ee dalka Turkiga.
Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland, madaxweynaha ayaa masuuliyiinta uu la kulmay waxaa uu kala hadlay arrimo ay kamidyihiin sii xoojinta xiriirka waxbarashada iyo tababarada shaqaalaha ee Puntland iyo dalka Turkiga.
Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa booqasho ku tagay machadka lagu barto farsamada gacanta BUSKEM oo kuyaala magaalada Bursa iyo masjidka EMIR Suldan.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kulan la qaatay duqa magaalada Bursa, Recep Altepe, waxaana kulankaas diirada lagu saaray sidii magaaladaas loogu mataanayn lahaa magaalo kamid ah Puntland, sida lagu sheegay bayaanka xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Turkiga oo mashaariic badan ka fuliyay gudaha Soomaaliya, ayaan wax mashaariic ah ka hirgalin deegaanada Puntland, balanqaadyo hore oo Turkiga sheegay in mashaariic ay ka fulinayaan Puntland ayaan wali waxba ka hirgalin.
September 7, 2016 Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo kulan la qaatay safiirka Turkiga ee Soomaaliya Olgan Beker
August 16, 2016 Madaxweynaha Puntland oo la kulmay haayadaha QM ee ka shaqeeya gudaha Puntland
Gugii Carabta kama dhici karo gudaha Zimbabwe, Mugabe oo u digay dadka banaanbaxa samaynaya
Garoowe-(Puntland Mirror) Todobo musharax, kuwaaso aan loo aqoon, ayaa iclaamiyay xalay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada madaxweynaha Puntland. Diiwaangelinta musharixiinta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa ku eg maanta oo Axad ah bishuna tahay 6 [...]
Raysulwasaare Khayre oo xilka ka qaaday Wasiirkii Diinta iyo Awqaafta
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilka ka qaaday Wasiirkii Diinta iyo Awqaafta. Wasiirka Warfaafinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo soo xiganaya digreeto kasoo baxday xafiiska Raysulwasaaraha ayaa [...]